Ekpere Mmechi Jizọs Kpere (Jọn 17) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
URU ỊMATA CHINEKE NA ỌKPARA YA BARA
OTÚ JEHOVA, JIZỌS, NA NDỊ NA-ESO ỤZỌ YA SI BỤRỤ OTU
Jizọs hụrụ ndịozi ya n’anya nke ukwuu. Ọ bụ ya mere o ji mee ka ha mara ihe ndị na-aga ime ha maka na ọ ma na oge ọ ga-ahapụ ha dị nso. Mgbe o mechara ka ha mara ihe ndị ahụ, o leliri anya n’eluigwe kpegara Nna ya ekpere, sị: “Mee ka ọkpara gị dị ebube, ka ọkpara gị wee mee ka ị dị ebube, ebe i nyere ya ikike n’ebe anụ ahụ́ niile dị, ka o wee nye ndị ahụ niile i nyere ya ndụ ebighị ebi.”—Jọn 17:1, 2.
N’eziokwu, Jizọs ghọtara na ihe kacha mkpa bụ ime ka Chineke dị ebube. Ma ndụ ebighị ebi ahụ Jizọs kwuru okwu ya bụ ihe na-akasi ndịozi ya obi. Ebe ọ bụ na e nyela Jizọs “ikike n’ebe anụ ahụ́ niile dị,” o nwere ike ime ka àjà ahụ ọ ga-eji ndụ ya chụọ baara mmadụ niile uru. Ma, ọ bụghị mmadụ niile ka ọ ga-abara uru. N’ihi gịnị? Ọ bụ n’ihi na ndị Jizọs ga-eme ka àjà ọ chụrụ baara uru bụ ndị ga-eme ihe ọzọ ọ na-aga ikwu. Jizọs sịrị: “Iji nweta ndụ ebighị ebi, ọ dị ha mkpa ịmata gị nke ọma, onye naanị ya bụ ezi Chineke, matakwa onye i zitere, bụ́ Jizọs Kraịst.”—Jọn 17:3.
Mmadụ ga-amatarịrị Chineke na Ọkpara ya nke ọma, ya na ha adịrị n’ezigbo mma. Ọ ga na-ele ihe anya otú ha si ele ihe anya. Ọ ga na-akpaso ndị ọzọ àgwà otú ha si akpaso ha àgwà. Ọ ga-aghọtakwa na ụmụ mmadụ ime ka Chineke nwee ebube dị mkpa karịa inweta ndụ ebighị ebi. Mgbe Jizọs kwuchara otú mmadụ ga-esi enweta ndụ ebighị ebi, ọ laghachiziri n’ihe ka mkpa ọ na-ekwu. Ọ sịrị:
“Emewo m ka ị dị ebube n’ụwa, ebe ọ bụ na arụchaala m ọrụ i nyere m ka m rụọ. Ya mere, ugbu a, Nna, mee ka m nwee ebube n’akụkụ gị, bụ́ ebube m nwere n’akụkụ gị mgbe ụwa na-adịbeghị.” (Jọn 17:4, 5) N’eziokwu, Jizọs chọrọ ka Chineke kpọlite ya n’ọnwụ, ya alaghachi n’eluigwe nwee ebube ahụ o nweburu.
Ma, Jizọs echefubeghị ihe ndị ọ rụrụ n’ozi o jere n’ụwa. O kpere ekpere, sị: “Emewo m ka aha gị pụta ìhè nye ndị i si n’ụwa nye m. Ha bụ nke gị, i nyekwara m ha, ha edebewokwa okwu gị.” (Jọn 17:6) Ihe Jizọs mere n’ozi ọma ya abụghị naanị ịkpọ Chineke aha ya bụ́ Jehova, o nyekwaara ndịozi ya aka ka ha mara ihe mere o ji aza aha ahụ. Aha Chineke na-eme ka anyị mata ụdị onye Chineke bụ na otú o si emeso ụmụ mmadụ ihe.
Ndịozi Jizọs amarala onye Jehova bụ, mara ihe Ọkpara ya na-arụ, marakwa ihe ndị Jizọs kụziiri ha. Jizọs medaziri obi gwa Chineke, sị: “Enyewo m ha okwu i nyere m, ha anatawokwa ya, ha amarawokwa n’ezie na m bịara dị ka onye nnọchiteanya gị, ha ekwerewokwa na ọ bụ gị zitere m.”—Jọn 17:8.
Jizọs kwuziri ihe dị iche n’etiti ndị na-eso ụzọ ya na ndị ụwa. Ọ sịrị: “M na-arịọ arịrịọ banyere ha; m na-arịọ, ọ bụghị banyere ụwa, kama banyere ndị i nyere m; n’ihi na ha bụ nke gị . . . Nna dị nsọ, chee ha nche n’ihi aha gị nke i nyere m, ka ha wee bụrụ otu, dị ka anyị bụ otu. . . . M na-eche ha nche n’ihi aha gị nke i nyere m; edebewokwa m ha, ọ dịghịkwa otu n’ime ha e bibiri ma e wezụga nwa mbibi ahụ.” Nwa mbibi ahụ bụ Judas Iskarịọt, onye pụrụla ịga kpọta ndị ga-ejide Jizọs.—Jọn 17:9-12.
Jizọs kwuru na ụwa kpọrọ ndị na-eso ụzọ ya asị. N’agbanyeghị nke ahụ, ọ gwara Chineke, sị: “Ihe m na-arịọ gị abụghị ka ị kpọpụ ha n’ụwa, kama ka i chee ha nche n’ihi ajọ onye ahụ. Ha abụghị nke ụwa, dị nnọọ ka m na-abụghị nke ụwa.” (Jọn 17:14-16) Ndịozi Jizọs na ndị ọzọ na-eso ụzọ Jizọs nọ n’ụwa. Ụwa Jizọs kwuru okwu ya ebe a bụ ụmụ mmadụ Setan na-achị. Ma, ndị na-eso ụzọ Jizọs agaghị na-eme ka ndị ụwa ma ọ bụ soro ha na-akpa àgwà ọjọọ ha na-akpa. Olee otú ha ga-esi ghara ịna-eme ka ndị ụwa?
Ha ga-adịrịrị nsọ, bụrụ ndị e wepụtara iche ijere Chineke ozi. Otú ha ga-esi eme ya bụ ịna-eme ihe ndị ha mụtara n’Akwụkwọ Nsọ Hibru nakwa ihe Jizọs kụziiri ha. Jizọs kpere ekpere, sị: “Jiri eziokwu doo ha nsọ; okwu gị bụ eziokwu.” (Jọn 17:17) Ka oge na-aga, Chineke ga-enye ụfọdụ n’ime ndịozi Jizọs mmụọ nsọ ka ha dee akwụkwọ ndị ga-eso ‘n’eziokwu’ ahụ ga-enyere mmadụ aka ya adị nsọ.
Ma, ndị ọzọ ga-emecha mụta “eziokwu” ahụ. N’ihi ya, Jizọs kpere ekpere, sị: “Ọ bụghị naanị banyere ndị a, [ya bụ, ndịozi iri na otu ahụ ha na ya nọ] kamakwa banyere ndị nwere okwukwe n’ebe m nọ site n’okwu ha.” Gịnị ka Jizọs kpegaara Chineke ekpere banyere ndị niile na-eso ụzọ ya? Jizọs sịrị: “Ka ha niile wee bụrụ otu, dị ka gị onwe gị, Nna, na mụ onwe m dị n’otu, mụ onwe m na gị adịrịkwa n’otu, ka anyị na ha wee dị n’otu.” (Jọn 17:20, 21) Jizọs na Nna ya abụghị otu onye. Otú ha si bụrụ otu bụ na ha anaghị eme ihe iche iche. Ekpere Jizọs bụ ka ndị na-eso ụzọ ya bụrụ otu, ya bụ, ka ha na-emekọ ihe ọnụ.
Obere oge tupu Jizọs ekpewe ekpere a, ọ gwara Pita na ndịozi ya ndị ọzọ na ọ na-aga ịkwadebere ha ebe n’eluigwe. (Jọn 14:2, 3) Jizọs kwughachiri banyere ya n’ekpere, sị: “Nna, banyere ihe i nyere m, ọ dị m ka ya bụrụ na ha onwe ha ga-eso m nọrọ n’ebe m nọ, ka ha wee hụ ebube i nyere m, n’ihi na ị hụrụ m n’anya tupu a tọọ ntọala ụwa.” (Jọn 17:24) Jizọs ji ihe a o kwuru gosi na ogologo oge gara aga, tupudị Adam na Iv amụta ụmụ, Chineke hụrụ Ọkpara ọ mụrụ naanị ya n’anya. Ọkpara ya a mechara bụrụ Jizọs Kraịst.
Mgbe Jizọs na-emechi ekpere ya, o kwuru okwu ọzọ banyere aha Nna ya na otú Chineke si hụ ndịozi ya na ndị ọzọ ga-amụta “eziokwu” ahụ n’anya. Ọ sịrị: “Emewokwa m ka ha mara aha gị, m ga-emekwa ka a mara ya, ka ịhụnanya i nwere n’ebe m nọ wee dịrị n’ime ha, mụ na ha adịkwa n’otu.”—Jọn 17:26.
Gịnị ka ịmara Chineke na Ọkpara ya pụtara?
Olee otú Jizọs si mee ka ndị mmadụ mata aha Chineke?
Olee otú Chineke, Ọkpara ya, na ndị niile na-efe Chineke si bụrụ otu?